ကွန်ပျူတာ Hangs ရခြင်း (၁ဝ)ချက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » ကွန်ပျူတာ Hangs ရခြင်း (၁ဝ)ချက်
ကွန်ပျူတာ Hangs ရခြင်း (၁ဝ)ချက်
Posted by we R one on Jun 26, 2012 in Computers & Technology, Copy/Paste | 11 comments
ကျွန်တော်တို့ ကွန်ပျူတာ ကိုသုံးနေရင် Hangs တာမျိုး Crashes ဖြစ်တာမျိုး ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ မိမိတို့စက်မှာ မလိုအပ်တဲ့ process တွေ အလုပ်လုပ်နေလို့ ဖြစ်ပါတယ် အဲဒီလို မဖြစ်ရအောင် ဖြေရှင်းနည်း (၁ဝ) ချက်ရှိတယ်။
မိမိတို့ computer မှာ ctrl+alt+ delete key (တစ်ချို့စက်တွေမှာ ctrl+shift+Esc ) နိုပ်ပြီ Task manager ကိုခေါ်လိုက်ပါ။ ပြီရင် processes ထဲမှာ ကို အသုံးမလိုတဲ့ software တွေကို End Process လိုက်လုပ်ပါ။
နောက်တစ်ခုက virtual memory တိုးပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ program တွေ အများကြီး run ထားတဲ့အခါ virtual memory မလုံလောက်တဲ့အတွက် စက် Hangs တာမျိုးတွေ ဖြစ်တက်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ Browser တွေရဲ့ History တွေကို ဖျက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ccleaner software နဲ့ ဖြေရှင်းက အတော် ကောင်းတယ်။ကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ software မသုံးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Internet e×plorer မှာ Tools ဆိုတာ တွေ့ကြမှာပါ။ အဲဒီမှာ internet option ထဲက General မှာ clear History ကို click လိုက်ပြီ ok ပေးလိုက်တာပါ။ Firefo× မှာလဲ ကျွန်တော်တို့ option ထဲက privacy ထဲမှာ private ထဲက setting မှာ ကျွန်တော်တို့ clear ပေးလိုက်ပါ။ Browser History တွေကို ပြောတာနော်။ဒီမှာ Down လိုက်ပါ။
နောက်တစ်ခုကတော့ Internet temporary files တွေကို delete ပေးရပါ့မယ်။ ဒါကတော့ option က ဖျက်တာနဲ့စာရင် ccleanner softeware နဲ့ ဖြေရှင်းတာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ cookies တွေကို ဖျက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ Internet Browser တွေက option ထဲကနေ cookies တွေကို ဖျက်ထုတ်လိုက်ပါ။
နောက်တစ်ခုကတော့ မလိုအပ်တဲ့ programs တွေကို ဖျက်ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့စက်မှာ မလိုအပ်တာတွေကို မိမိတာလျင် အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ။ မိမိcomputer က control panel ထဲက add/remove programs ထဲက မလိုတာတွေကို install လုပ်လိုက်ပါ။ software လေးနဲ့သုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ တင်ပေးလိုက်တယ်နော်။ဒီမှာ Down လိုက်ပါ။
နောက်တစ်ခုကတော့ files တွေကို ပြန်စီတာဖြစ်ပါတယ်။ Defragmenter ချတယ်လို့လဲခေါ်ပါတယ်။ Defragmenter ချတဲ့နေရာမှာ မိမိ Defragmenter ချတဲ့အခါ မိမိချချင်တဲ့ Disk မှာ free space 15% ရှိရပါမယ်။ မရှိရင်တော့ defragmenter ချလို့ မရပါဘူး။ လုပ်နည်းကတော့ all programs/accessories /system tool/disk defragmenter မှာ မိမိ partition ခွဲထားတစ်လောက် file တွေကို ပြန်စီလိုက်ပါ။
မိမိစက်မှာ error တက်နေတဲ့ program တွေကို check လုပ်လိုက်တာပါ။ ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲဆိုရင် မိမိ error ရှာချင်တဲ့ disk ပေါ်မှာ right click ထောက်။ properties ထဲက tools မှာ error-checking အကွက်ထဲမှာ check Now ကို click ပြီ မိမိတို့လုပ်စေချင်တာကို အမှန်ခြစ်ပေးပြီ check လုပ်လိုက်ပါ။
Run ထဲမှာ (%temp%;prefetch;recent) ကို ပုံမှန်ဖျက်ထုတ်ပေးပါ။ ဖျက်လို့မရတဲ့ files တွေလဲတွေ့ရမှာပါ။ ဖျက်ရချင်ရင်တော့ unlocker softeare နဲ့ ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။ free ပေးပါတယ် google မှာရှာလိုက်ပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ ကျွန်တော်တို့ computer ထဲက search button မှာ cooking လို့ ရိုက်ထည့်ပြီ သူ့ထဲမှာ ရှိတဲ့ ဖိုင်တွေကို ဖျက်ထုတ်လိုက်ပါ. ဗိုင်းရပ်အများဆုံးနားခိုတဲ့ နေရာလဲဖြစ်ပါတယ်။
နာက်တစ်ခုကတော့ မိမိတို့ computer ဖွင့်ဖွင့်ချင်မှာ process တွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့ window အတက် အတော်လေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် msconfig က startup ထဲမှာ မလိုအပ်ဘူးထင်တာတွေကို disable ပေးထားလိုက်ပါ။ လိုအပ်တာတွေတော့ မှားမပေးနဲ့နော်။ နောက်တစ်ခုကတော့ shutdown လုပ်တဲ့အခါမှာ power ပေါက် ထိုးပိတ်တာမျီုးမလုပ်ပါနဲ့။
ဒါကြောင့်မို ့၊ ကျုပ် ကွန်ပျူတာခဗျာ ဟမ်းဟမ်းနေတာကိုး
ကျေးဇူးပါဘဲ ဝီအာဝမ်းကြီးရေ ။
ကိုဝမ်း ……. တဲ့ ..
သားသားလည်း မသိလို့ မေးကြည့်ဒါ …
ဟမ်မလေး… ရှမ်းပြည်သားရယ် ကိုဝမ်းတဲ့ ကြက်သိုင်းတောင် ထမိတယ်…
မီးက မိန်းကလေး ပါရှင့်…
အိုခေ .. အကြီးကြီး ရှဲရှဲ ပါ …
ကျေးဇူးပါခင်ဗျား၊ကျနော်လည်း လက်တွေ့အသုံးချဘို့ ကူးယူဖြန့်ဝေပါ့မယ်၊ခွင့်ပြုပါဗျား။
——– ပါဗျား ။ လို့သာပြောတယ် ကူးပြီးလိုက်တာကအရင် ဟီး ဟီး။
ကျေးဇူးဗျာ။ကျနော် မြေခွေးကရောဆာက ခဏခဏငို ဟန်းနေတာ။